Anyị kpọchie N'ibuli D Shackle, Anyị Type dobe esorowo ụta nkekọ - Shenli rigging
Nyocha ụlọ nyocha
Nlekọta Ndị Ahịa +
Dee maa jijiji
Ebe na-ebuli elu
Njikọ ihe njikọ
Master Link & nzukọ
Companylọ ọrụ anyị abụrụla onye ndu nke ụlọ ọrụ na-ebuli ma na-agbagha site na ịghọ otu n'ime ndị isi na-ebuli ụkpụrụ nnochi nke meriri SAC (Nhazi Nhazi nke PRC).
esorowo ya n'agba
Nchọpụta Teknụzụ Nchekwa Maka Nkume Akaụntụ CE
Ngwunye usoro nke mmadụ na-ebuli elu maka nko ahụ, na 1.5 ugboro gosiri akara dị ka ule nnwale ule. Nku eweli usoro maka ike chụpụrụ, na 2 ugboro gosiri ibu dị ka ule ibu ule. Wepụ nko ibu ule, ghara inwe ihe ọ bụla doro anya ntụpọ na dịkwuo ogo deformation, na o ...
Matte Black Bow Type Anchor Shackle na ịghasa Pin
Ahaziri Matte nwa arịlịka shackle na 6 ugboro nchekwa ihe maka ogbo ewu rigging akụrụngwa gụnyere arịlịka nko, clevis nko, anya nko, njikọ njikọ, nwe njikọ, ọkwa 8 ígwè na-abụghị nanị na-eweli ụlọ ọrụ ma ọ bụ mmanụ & gas ụlọ ọrụ, anyị nwekwara ike ime ha n'ime b ...
DSL (Hebei Shenli Rigging Co., Ltd) na-agwa gị ka ị soro 15.4h23 Booth nke 128th Online Canton Fair.
Ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu na-efe efe nke ụwa niile emeela ka yigharịrị mbipụta nke 127th nke Canton Fair. Mgbe ọnwa abụọ nke nkwadebe, A ga-eme ihe ngosi nke iri abụọ na asatọ na ntanetị na 15thJune DSL （Hebei Shenli Rigging Co., Ltd） ọkachamara na rụpụta accessori ...
Ekwentị ： 0086-13803289393
Adreesị ： Mpaghara Donglv, Baoding City, Hebei, China